Robert Mugabe – 247NEWSUPDATE BLOG
Zimbabwe’s founder Robert Mugabe was honored as an icon, principled leader and African intellectual giant at a state funeral on Saturday, after a week of disputes over his burial threatened to embarrass President Emmerson Mnangagwa. Mugabe led Zimbabwe for 37 years, from independence until he was ousted by the army in November 2017, by which… Read More Leaders, supporters pay tribute at state funeral of former Zimbabwean president Robert Mugabe
Robert Mugabe, the guerrilla leader who led Zimbabwe to independence in 1980 and ruled with an iron fist until his own army ended his almost four decade rule, has died aged 95. Mugabe died in Singapore, where he has often received medical treatment in recent years, a source with direct knowledge of the matter said.… Read More Former Zimbabwean president Robert Mugabe dies at 95
September 6, 2019 March 5, 2020 247newsupdateLeave a comment
Former Zimbabwean president Robert Mugabe granted immunity, assurance of safety
Zimbabwe’s former president Robert Mugabe was granted immunity from prosecution and assured that his safety would be protected in his home country as part of a deal that led to his resignation, sources close to the negotiations said on Thursday. Mugabe, who had led Zimbabwe from independence in 1980, stepped down on Tuesday after the… Read More Former Zimbabwean president Robert Mugabe granted immunity, assurance of safety
November 23, 2017 November 23, 2017 247newsupdateLeave a comment
Robert Mugabe resigned as Zimbabwe’s president on Tuesday a week after the army and his former political allies moved against him, ending four decades of rule by a man who turned from independence hero to archetypal strongman. The 93-year-old had clung on for a week after an army takeover and expulsion from his own ruling… Read More Zimbabwean President Robert Mugabe announces resignation
November 21, 2017 November 21, 2017 247newsupdateLeave a comment
Zimbabwe’s parliament began an impeachment process against President Robert Mugabe on Tuesday that looks set to bring his domination of a country he has ruled since independence nearly four decades ago to an ignominious end. In the last week, the 93-year old has clung on in the face of an army takeover that shattered his… Read More Zimbabwean Parliament begins impeachment process against President Robert Mugabe
November 21, 2017 247newsupdateLeave a comment
Zimbabwe’s ruling party will dismiss 93-year-old President Robert Mugabe as its leader on Sunday and kick him out, stripping its ruler for the last 37 years of one of his final vestiges of authority, the head of the liberation war veterans said. Speaking as he walked into an extraordinary meeting of ZANU-PF’s central committee, Chris… Read More Zimbabwe ruling party ZANU-PF set to dismiss ousted President Robert Mugabe as its leader
November 19, 2017 247newsupdateLeave a comment